Nahoana isika - AlorAir
Nahoana Aho no Mila ny Dehumidifier?
Fandrosoan'ny teknolojia dia tsy fiaraha-monina ihany no manosika hatrany, fa hanangana ny fahafantarana ny fikojakojana. Midika izany fa avo dehumidifier fahombiazana afaka manampy ny olona amin'ny dehumidification-manidina, ary koa ny hampihena ny vola lany fikojakojana hoavy. Ohatra, ny hamandoana be loatra dia afaka mitarika ho amin'ny fahasimbana lafo ny rafitra sy ny singa iray trano.
Hamandoana be loatra mety hitranga amin'ny olona iray ny toeram-piasana na ny velona tontolo iainana. Raha mbola nieritreritra teo aloha ho tranga voajanahary, fantatsika ankehitriny fa afaka hisorohana ny voka-dratsin'ny hamandoana be loatra.
► hamandoana be loatra Aiza ve ny Olona?
Miankina amin'ny mari-pana ny rivotra, rivotra dia afaka mihazona nisy habetsahan'ny rano eo amin'izay vaporous fanjakana. Rehefa mihamangatsiaka ny rivotra, ny fahafahana hanao araka mihena ny rano. Midika izany fa ny mamoaka rivotra mangatsiaka mihoatra hamandoana ho ambonin'ny, izay miteraka ny dampness sy ny condensation Fantatsika tsara.
► Nahoana Mifidiana Dehumidifiers ny hamandoana be loatra?
Wooden rafitra dia mora bobongolo sy ny lo. Bobongolo rehefa mandeha ny fotoana sy ny rot afaka mitarika ho olana, toy ny rihana sy uneven Diso varavarana hazo fisaka.
15% ny faritra fanamboarana ho kitay no vokatry ny rot sy ny bobongolo. Izany mitarika ho amin'ny tokony ho 20 arivo tapitrisa tongotry ny hazo ho ringana, izay mihoatra noho izay simba amin'ny afo.
Rindrina ivelany dia afaka mora foana mitroka hamandoana eo amin'ny faritra. Rehefa mampihena ny hafanana ho etỳ ambonin'ny kokoa, dia mikeleza aina fatratra fanampiny rano, mitarika ny manimba tsingerina.
Dehumidifier no hanesorana hamandoana be loatra avy ny tontolo iainana sy hanampy foana amin'izay boky ara-ny mety haavon'ny hamandoana. Izany dia manampy mampihena ny fandaniana fikojakojana sy hitandrina bobongolo simba amin'ny kely indrindra.
Harafesiny ny vy dia matetika mitranga satria ny hamandoana be loatra. Household fitaovana elektrika sy ny herinaratra singa tsy afaka miasa raha mandray hamandoana be loatra avy amin'ny rivotra. Sakafo, fanafody, boky, ary ny akanjo ihany koa ny mora simba, ary mety ho lasa bobongolo amin'ny dampness.
Dehumidifier afaka manome ny vahaolana feno ho fitehirizana rehetra ny olana. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny mahomby, miasa haingana AlorAir dehumidifiers antoka fa ny fananany rehetra dia araka ny tokony ho nikarakara.
Mando tontolo iainana no tena manintona ny hanimba zavatra, toy ny vitsikazo, vitsika, sy kalalao, dia matetika miaina amin'ny tratra na manao ratsy ny an-trano nandritra ny fotoana maharitra. Ireo Pest infestations fahasimbana mety betsaka ny an-trano sy ny fahasalamana.
Dehumidifier Mora foana ny aina hamandoana haavon'ny noho ny velona sy ny asa toerana. Amin'ny alalan'ny mivezivezy maina sy mampahazo aina rivotra, dia afaka mampihena Pest voakaikitry sy hanatsarana ny kalitaon'ny rivotra.
Indoor havany hamandoana haavon'ny ny 60% na mihoatra hitombo be dia be ny vintana ny bobongolo, maty fotsy, sy ny holatra, izay eo ambonin'ny kitay hazo miroborobo, vovoka, baoritra, ary taratasy.
Niely tahaka ny bobongolo, dia mamoaka an-tapitrisany spores amin'ny rivotra ianareo. Izany mitarika ho amin'ny musty, ary tsy mahafinaritra fofona, ankoatra ny fampitomboana ny mety hisian'ny toe-piainana mampidi-doza ara-pahasalamana.
Ny dehumidifier amim-pahombiazana dia afaka hampihena ny hamandoana an-trano, manao ny velona aina kokoa ny tontolo iainana, ka mampihena ny vintana ny aretina lehibe.
Tianay ny fanavaozana!
AlorAir dia manome andianà nandroso IAQ sy ny dehumidification vahaolana amin'ny alalan'ny dehumidifiers, Movers rivotra, rivotra scrubbers, ary ny maro hafa. Ny zava-baovao ny vokatra dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana maro miainga amin'ny indostria ho fonenana. Ny asa fitoriana dia ny tsy mitsahatra fanavaozana eo amin'ny vokatra dia manome ho an'ny mpanjifa.
► Advanced Coils Avo Hamorona COP
Ny coils amin'ny AlorAir dehumidifiers dia lehibe kokoa noho ny coils ny mahazatra dehumidifier. Ankoatra izany, ny coil sy ny vombony endrika ahitana endri-javatra tsy manam-paharoa izay tsy ho hita ao amin'ny mora, namoaka haino dehumidifiers. Ny oversized coil sy ny hafanana Afaka manaisotra 2-3 heny isaky ny kilowatt hamandoana toy ny mahazatra dehumidifier. Ny tena mahomby AlorAir dehumidifier mamonjy hatramin'ny $ 250 isan-taona ny vola lany amin'ny angovo ary matetika haharitra 10+ taona amin'ny dimy taona voafetra Warranty.
► Epoxy Powder Coating amin'ny Coils
Mba hisorohana Freon leakage, dia nahafaty indro kely ho dehumidifier, AlorAir no nampiditra epoxy mifono coils. Endri-javatra vaovao io dia miitatra ny fiainan'ny coils alalan'ny fanomezana fiarovana manohitra manimba tsikelikely ny tontolo iainana sy ny fitazonana ny hafanana coil transferability. Ankoatra izany, ny avo Rotary compressor fahombiazana ambony indrindra no miantoka ny fahombiazan'ny amin'ny vidiny ambany indrindra azo atao.
► Heavy Adidy Condensate paompy
Paompy matetika manana olana lehibe toy ny overheating, tratra tsy fahombiazana, ary ny rusting. Soa ihany, ny injeniera efa lasa ny paompy izay azo antoka kokoa. Miaraka amin'ny 20 'fanandratako lavidavitra, ny condensate paompy manome anao ny fahalalahana tatatra na aiza na aiza.
Ny telegrama tamin'ny condensate AlorAir ny paompy no Connect plugs haingana. Izany mahatonga fametrahana sy fikojakojana fifadian-kanina sy mora.
► Quick Access ny anatiny Components
AlorAir rehetra dehumidifiers mora manome fahafahana hahazo singa anatiny. Series ny tafio-drivotra dia manana fonony clamshell raha ny Sentinel Series dia fitaovana amin'ny fidirana tontonana. Ankoatra izany, ny paompy manana Connect haingana telegrama, noho izany dia mora azo esorina tsy fahazoana ny fanaraha-maso ny birao.
Ny lavitra humidistat mahatonga AlorAir dehumidifiers ny safidy tsara indrindra, raha ny tarika ho ducted-baovao efitrano. Ny humidistat tsy voatery ihany koa ny manasongadina duct tsoavaly flanges, izay hampihena ny fametrahana fotoana mampifandray ny ducting rafitra.
► Sensor amin'ny Bypass Air Design
Dehumidifiers AlorAir rehetra dia ahitana ny hamandoana sensor amin'ny Bypass Air Design, izay manakana fohy bisikileta. Sela Mpandray Hafanana mora voan'ny anatiny hafanana sy ny hamandoana, ka mahatonga azy ireo mora ny fandraisana ny ratsy famantarana eo amin'ny fitondrana eo na eny. Kosa, izany shortens ny mahatratra ny compressor sy mahatonga ny rafitra refrigerant miovaova. Mba hiadiana amin'ity laharana ity, ny Bypass Air Design mamela ny sensor mba ho tanteraka anatiny Voaro amin'ny hafanana sy ny hamandoana.
► tsy mety resy Main Board Performance
Ny tena birao dia afaka hisy fiantraikany be ny fanatanterahana ny dehumidifier. Noho izany, zana-kazo rehetra AlorAir faritra dia mifono ho fiarovana. Ny birao dia hanova porofo sy mahari-pery ny magnetization. Ny faritra sy ny fanatanterahana ny birao tsirairay dia 100% fitiliana.
► Ductable Unit Nanao ny Fiainanao Mora
Ny AlorAir fianakavian'ny dehumidifiers manolotra fitaovana ho an'ny maro samihafa ny fampiharana. Ny duct fitaovana mamela ny vondrona mba ho apetraka any amin'ny toerana lavitra, toy ny milina efitra, ary ny maso avy tamin'ny efitra hafa ao an-tokantrano. Misy fampiharana, ny lavitra humidistat Mety ho ilaina.
Ahoana no hamonjeko anareo AlorAir Vola?
Mifehy ny hamandoana haavon'ny ao an-tokantranonao dia ny fanalahidin'ny fiarovana an-trano, fahasalamana, sy ny fianakaviana. An AlorAir dehumidifier dia takatry ny vahaolana ny hamandoana olana. Ny fampiasam-bola voalohany eo amin'ny kalitaon'ny rivotra an-trano ambony dia azo sitrana rehefa afaka taona vitsivitsy ny angovo tahiry.
Ny avo COP ny AlorAir ny dehumidifiers afaka hamonjy anareo ho amin'ny $ 250 amin'ny angovo vola lany raha oharina amin'ny mahazatra dehumidifiers. An AlorAir dehumidifier dia matetika haharitra 10+ taona, ary dia tonga noho ny dimy taona voafetra Warranty. Izany no kasaina tahiry nanameloka tsy fampihenana ny fandaniana famerana mari-pana. Rehefa afaka hihazona tsy miovaova havany hamandoana ny 50% na latsaka, ny HVAC dia tsy maintsy miasa mafy mba ho ny aina mafana.
Ny fampiasam-bola ao anatin'ny AlorAir dehumidifier dia tsy vitan'ny hoe manome hery tahiry nefa, dia ihany koa ny mamorona aina kokoa sy salama toerana velona.
AlorAir ny nafatotra ho amboarany ho an'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fitaovana fanadiovana:
Nahita ny vahaolana tsara indrindra azo sarotra sy mampikorontan-tsaina ho an'ny mpividy ny kely saina. AlorAir dia lasa maro Packages ny Famerenana amin'ny laoniny:
1. Avereno ny rano fahasimban'ny
2. Speed ​​bobongolo remediation
3. Kapao taorian'ny safo-drano fikojakojana-poana